May | 2012 | Dr Ko Ko Gyi's Blog
We agree with the wish for the TRUE UNION spirit of the MINORITIES
အမျိုးသမီးများကို စော်ကားမှုအား လူမျိုးဘာသာ အခြေခံဖြင့် လှုံ့ဆော်တင်ပြခြင်း
SOURCE: Picture FB of Ag Ko
Post below:MMSY NEWS – အမျိုးသမီးများကို စော်ကားမှုအား လူမျိုးဘာသာ အခြေခံဖြင့် လှုံ့ဆော်တင်ပြခြင်း
အမျိုးသမီးများကိုစော်ကားမှုအား လူမျိုးဘာသာအခြေခံဖြင့်လုံ့ ဆော်တင်ပြခြင်းသည် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလား၊ စနစ်ဆိုးသက်ဆိုးရှည်ရေးလား။
မြန်မာအစိုးရ ခေတ်အဆက်ဆက်တွင် နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းကြုံလာတိုင်း ဘာသာရေး ပြသနာများဖန်တီးကာ နိုင်ငံရေး အာရုဏ်လွဲပေးလျက်ရှိ သည်။ ပြည်သူများက အစိုးရကို ဆန့် ကျင်လာပြီဆိုလျှင် မငြိမ်မသက်ဖြစ်လာပြီဆိုလျှင် ဘာသာရေးပြသနာ မီးထွန်းရှာကာ အာရုဏ်လွဲပေးလျက်ရှိ ရာ ယခုအချိန်တွင် မြန်မာအစိုးရသည် ပြည်သူများ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးဆန္̕ဓပြမှုများ အပြင် မြစ်ဆုံရေကာတာ ပြန်လည်တည်ဆောက်နေမှုများအပေါ် အခဲ မကျေမှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး အကျပ်တွေ့ နေဟန်ရှိသည်။ သို့ ရှိရာ လူမျိုးရေး ဘာသာရေး ပြသနာများ အစပေးလာမည်ကို အထူးသတိထားရန်လို သည်။
Tags:Asia, Aung San Suu Kyi, Buddhism, Burma, Burma Politics, Islam in Burma, Muslim, Myanmar
SOURCE: MMSY– မြန်မာနိုင်ငံရေးနှင့် ဖွတ်မရ ဓားမဆုံး မြန်မာမွတ်စလင်မ်များ
Tags:All Burma Students' Democratic Front, Burma, Mainstream media, Non-governmental organization, United States
Myanmar government had declared that they have started the Democratization of Myanmar. But recently the Union Ministry for Immigration and Man Power of Myanmar has launchedaprogram called “Moe Pwint” Project under which citizenship scrutiny cards and family member registration documents are issued for its natural citizens only excluding the mixed blooded people of Chinese, Indians, Bengalis, Muslims of Myanmar and especially Rohingyas.
They have revived the above bigot law of the previous Military Government’s discrimination of the Myanmar Citizens based on race and religion.
Tags:Bengali, Burma, Burma Politics, Chinese people in Burma, Military Government, Myanmar, Rohingya, Rohingya people
ORIGIN OF BAMA is India and China
ORIGIN OF BAMA is India and China as they are the world’s biggest ancient cradle of civilizations. High, snow peaked, rough and steep Himalaya mountain ranges block the direct interaction or travelling between the two of them except for the virtual highway through Myanmar/Burma. So there werealot of travelers, migrants, victims of disasters and famine, war refugees and etc moving along this Burma Highway and some of them settled in Burma.
တကောင်း ကလဲ မဟုတ်၊၊ကျောက်ဆည်ကလဲ မဟုတ်၊၊
စကားက တီဗက်တိုဗားမင်း ၊၊
စာ နဲ့ ယဉ်ကျေးမှု က မဇ္ဈိမ ၊၊ By U Aungzaw Win
Read more below, to understand the REAL origin of Bamas.
Tags:Asia, Bama, Burma, Burmese Indians, China, Himalaya, India, Myanmar
Source: Google picture search results